Yakobo 4 NA-TWI - Brɛ wo ho ase ma Onyankopɔn - Ɔko ne - Bible Gateway
Yakobo 3Yakobo 5
Yakobo 4 Nkwa Asem (NA-TWI)
4 Ɔko ne akasakasa a asi mo mu yi fi he? Efi mo ara mo akɔnnɔ a ɛne mo nipadua di asi no. 2 Morepɛ nneɛma bi nanso morentumi nnya, ɛno nti moayɛ mo adwene sɛ mubedi awu. Mo ani abere denneenen repɛ nneɛma bi nanso mo nsa nka, enti akasakasa ne ɔko nam so ba. Nea morehwehwɛ no, mo nsa renka efisɛ, mummisa Onyankopɔn. 3 Na sɛ mubisa koraa nso a, mo nsa renka, efisɛ, mowɔ adwemmɔne. Mubisa nneɛma a ɛyɛ mo akɔnnɔde.